Stieg Larsson, umbhali owayezinikele emva kokufa kwakhe | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | I-Biography, Iincwadi, Inoveli emnyama
Caphula ngo Stieg Larsson.
UStieg Larsson wayengumbhali waseSweden owaziwayo kwiindawo zonke zehlabathi ngokuvuka, kubufutshane besithunzi sasebusuku, italente enkulu yokubhala. Yayiyinxalenye eyaziwayo kwaye, kwangaxeshanye, imeko yokuhlela kunye neemovie. Wazakhela udumo olukhulu njengentatheli yemfazwe, owasetyhini oqinisekileyo, otshayayo, kunye nomthandi weenoveli zolwaphulo-mthetho.
Ewe, umlo ongakhathaliyo wokuxhatshazwa kunye nobundlobongela ikwayinxalenye yelifa lakhe. Zonke ezi mpawu zenza ukuba uLarsson abe ngumntu owaziwayo. Ke ngoko, imikhosi yakhe yabafundi ayothusi, njengoko ikwisikhundla sakhe esihloniphekileyo kwicandelo loncwadi. Ngaphezulu, Inani lakhe lafumana umbulelo womoya oyimfihlakalo- ubukhulu becala kowona msebenzi wakhe uthandwayo, Millennium, ipapashiwe Isidumbu.
1.1 Ukuzalwa kunye nobuntwana
1.3 Intatheli kunye nomlweli woluntu
1.4 Iqabane lakho elingenamiqathango
1.5 Umdla okhuthazwe "lixesha lakhe lasimahla"
2 Imisebenzi yakhe, izimvo
3 Mililnium Trilogy
3.1 Amadoda Abangabathandi Abasetyhini (2005)
3.2 Intombazana eyayiphupha ngomdlalo kunye netoti yepetroli (2006)
3.3 Ukumkanikazi kwiNdlu yoYilo (2007)
4 Ukufa ngesiquphe kunye nelifa
UKarl Stig-Erland Larsson wazalelwa eVästerbotten, eSweden, ngo-Agasti 15, 1954. Kwakusisiqhamo somanyano lwesibini esitshatileyo nesithobekileyo, abathi kamva bangabinakho ukuyixhasa ngenxa yemali encinci abanayo. Ngenxa yoko, umbhali wakhula kunye nomakhulu notatomkhulu wakhe eNorsjö, indawo esemaphandleni emaphethelweni eVästerbotten.
Emva kwexesha, ngo-1962, uyisemkhulu, Ngubani owayeyintsika yakhe kunye nomcebisi kwicandelo lezopolitiko nelamalungelo oluntu, udlule. Larsson, ndineminyaka esi-8 kuphela, wachaphazeleka kakhulu. Ezi ndaba zingalindelekanga zamnyanzela ukuba abuyele kubazali bakhe bemvelo, imeko eyamenza wangakhululeki umntwana, kuba akazange akwazi ukuziqhelanisa.
Ngexesha lika-1964, unyaka omncinci wokuqala uStieg wakonwabela ukukhuphela imini nobusuku kumatshini wokubhala onengxolo. awayeyifumene njengesipho. Nangona kunjalo, ulonwabo lwalulolwexeshana. Ukungaqondani kosapho lwakhe ngesandi se-artifact, kunye neengxaki zokungahambelani kwindawo entsha, bakhokele umbhali ukuba ashiye ikhaya eneminyaka eli-16 ubudala.
Intatheli kunye nomlweli woluntu
Ngama-XNUMX, uStieg wayezibandakanya kwezopolitiko. Usebenze ilizwe lakhe iminyaka emibini kwinkonzo yasemkhosini enyanzelekileyo; Emva kwexesha, wabhalisa kwiLungu laBasebenzi bamaKomanisi. Nangona engazange abe nomsebenzi weyunivesithi njengolu hlobo lobuntatheli, wafumana isikhundla sokuba yintatheli yemfazwe ngomkhosi wakhe.
Phakathi kuka-1977 no-1999 wayesebenza njengomzobi weendaba kunye nentatheli yearhente ebizwa ngokuba yiTidningarnas Telegrambyra (TT). Vula Ngo-1995 wanyusa iSiseko se-Expo, Iziko elijongene nokufunda i-apogee yobuhlanga kwilizwe laseSweden. Ukwengeza, waba ngumhleli weli phephancwadi kwesi siseko, apho aqinisekisa khona ulwazi lwakhe lwamaqela asekunene eSweden.
Iqabane lakho elingenamiqathango
Ngokuhambelana nomsebenzi wakhe njengentatheli yemfazwe, naye kukhuthazwe uqhanqalazo ngokuchasene neMfazwe yaseVietnam eSweden. Ku kolu qhankqalazo uthando belusazi, umntu oya kuba liqabane lakhe elingenamiqathango kude kube ziintsuku zakhe zonke. Kwakumalunga nomyili wezinto ezintle waseSweden kunye notshantliziyo kwezopolitiko ogama linguEva Gabrielsson.
UGabrielsson noLarsson zange bathathe isigqibo somtshato osemthethweni ukuze bangabeki ubomi bakhe emngciphekweni. Kwaye oko kwakusengqiqweni, kuba uStieg wayehlala esongelwa ngokufa yimibutho yezopolitiko yasekunene. Ke, Abazange bagqibezele okanye bashiye naluphi na uxwebhu lomanyano olusemthethweni phakathi kwabo. Nangona kunjalo, bahlala kunye iminyaka engama-30, de kwasekufeni kukaLarsson.
Ungayithenga le ncwadi apha: Amadoda angabathandi abafazi
Umdla okhuthazwe "lixesha lakhe lasimahla"
Ngobomi obufihlwe kangako kuluntu, waseSweden wazimela kwiintlobo ezimbini ezinomdla kuye: ibali elingeyonyani kunye nesayensi. Uthando awayenalo loncwadi lwamkhuthaza ukuba abhale ngexesha lasemva kwemini nasebusuku, emva kokufezekisa eminye imisebenzi yakhe. Nditsho nakwiintsuku ezinde zobusuku obude.
Imisebenzi yakhe, izimvo
Imisebenzi yakhe ibe yinto ekuphikiswana ngayo kwabanye abantu kuncwadi. Kwelinye icala, zininzi izimvo ezintle apho uStieg U-Larsson uchazwa njengomntu onobuchule bokubhala. Ngapha koko, kwizangqa ezininzi zoncwadi uthathwa njengomnye wababhali abakhulu benkulungwane yama-XNUMX.
Kwelinye icala, ababhali abanjengoMario UVargas Llosa usibona ngamehlo ngamehlo isitayile sikaLarsson njenge:
"... isebe lesihogo, apho iijaji zithintela khona, oogqirha bengqondo bathuthumbisa, amagosa asebupoliseni kunye neentlola benza ulwaphulo-mthetho, abezopolitiko bayaxoka, oosomashishini bayanyenga kwaye amaziko ngokubanzi abonakala ngathi ngamaxhoba obhubhane wenkohliso yaseFujimori."
Phakathi kuka-2001 ukuya ku-2005, uStieg wazinikezela ekubhaleni ngaphezulu kwamaphepha angama-2.200 XNUMX esaga yakhe ebizwa Millennium, eligama walinika iphephancwadi eliyintsomi leenoveli zakhe. Kuluhlu lweenoveli ezintathu zolwaphulo-mthetho ezibekwe eSweden, Ezineempawu ezimbini eziphambili: uLisbeth Salander noMikael Blomkvist.
Umlinganiswa ophambili usebenza njenge umntu onobuchule wokuchasana noluntu Uneminyaka engama-20 ubudala kunye nenkumbulo yokufota, kunye neqabane lakhe yintatheli. Ngokudibeneyo bahlala bebandakanyeka kuthotho lweziganeko ezibenza babenetyala lezityholo zolwaphulo-mthetho. Ke, ukuze baphikise izityholo, kufuneka bafumane oyena nobangela.
Amadoda angabathandi abafazi (2005)
Lo ngumsebenzi wokuqala wokubhala we-trilogy, kwaye yapapashwa kwilizwe lokuzalwa kombhali kwiinyanga emva kokufa kwakhe. Yayiyile nkcukacha yokugqibela yokugqibela eyathi yasasaza ngokukhawuleza udumo lwenoveli kwihlabathi liphela. Kuye, IHarryet Vanger, umfazi Kwintsapho efumileyo, uyanyamalala kwisiqithi saseSweden.
Emva kweminyaka engamashumi amathathu anesithandathu yokungaqiniseki malunga nokuba uphi, uphando luyaqhubeka ngemibuzo emininzi. Imfihlakalo ikhokelela uHenrik Vanger (umalume womntu olahlekileyo) ukufumanisa ikamva lomfazi. Ukwenza oku, uqesha uMikael Blomkvist, othi naye afumane inkxaso eLisbeth Salander ukusombulula eli tyala.
Intombazana eyayiphupha ngomdlalo kunye netoti yepetroli (2006)
Intombazana eyayiphupha ngomdlalo kunye netoti yepetroli.
Eyaziwa njengeLatin America njenge Intombazana eyayidlala ngomlilo yivolumu yesibini yeziganeko zikaMikael Blomkvist kunye noLisbeth Salander. Kweli nqanaba lesibini, umbhali unika uSalander ukubalasela ngakumbi, kuba uphandwa ngamapolisa phantsi kwetyala lokubulala.
Intatheli kunye nentombi yakhe babulawa, ngenxa yenqaku malunga nokurhweba ngabantu basetyhini ukusuka eMpuma Yurophu. Uxwebhu ekuthethwa ngalo lwaluza kupapashwa kwiphephancwadi Millennium, kodwa ulwaphulo-mthetho luyayinciphisa yonke into. Ubungqina bukhomba ukuba uSalander ngoyena mrhanelwa uphambili, ke ngoko uBlomkvist kufuneka angqine ukuba akanatyala.
Ukumkanikazi kwibhotwe loyilo (2007)
Isixa sesithathu sithengise ngaphezu kwe-200.000 iikopi ngosuku olunye. Amaziko ayo ayila ityala elitsha kwisibini sabaphandi. USalander ufuna ukwenza ubulungisa eyedwa, ke ulandela le ndoda izame ukulwa nobomi bayo kunye namaziko oluntu abubhangisileyo bonke ubungqina beli tyala.
Ukufa ngesiquphe kunye nelifa
Ukuthanda kukaLarsson yayikukwenza iinoveli ezili-10 zolwaphulo-mthetho, kodwa ukufa kwakhe ngesiquphe akuzange kumvumele ukuba aqhubeke nomsebenzi wakhe wokubhala. Nangona kunjalo, usapho lwakhe lunike amalungelo okupapasha kuDavid Lagercrantz, ogqibe kwelokuba aqhubeke neminye imisebenzi. Ngokucacileyo, isicwangciso-qhinga sibe yimpumelelo enkulu.
UStieg Larsson wasweleka eStockholm ngoNovemba 9, 2004, ngenxa yesifo sentliziyo.. Emva komsebenzi wakhe wokuzinikela rhoqo kunye nokuzinikela, wayehlala indoda enomdla ogqithisileyo wecuba, ikofu kunye nokutya okungenamsoco. Ukongeza koku, wayesoloko ephethwe kukungalali nokudinwa. Okulusizi kukuba, zonke ezi zinto zikhokelele kwindibaniselwano eyingozi ephelise ubomi bakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » I-Biography » UStieg Larsson
IiBiggles. UCaptain WE Johns udume kakhulu ngesiNgesi